Nitoraka ny kortezin’ny filoha : Mpitondra taxi ilay maty « novonoina »
Voatonotonona ny mpitandro ny filaminana. Omaly vao fantatry ny fianakaviany fa i Hajamananirainy Zeno Marc na i Bota ilay lehilahy maty voalaza fa maty naterin’ny mpitandro ny filaminana teny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona…
Vao terabao anefa ny vadin’ity lehilahy ity, izay safotra matetika mihitsy noho ny toe-java-misy.
« Mpitondra fiarakaretsaka i Bota. Eny Andohatapenaka izy no mipetraka, ka avy nanatitra ny fiarany teo amin’ny fijanonan’ny fiarana amin’ny alina eo akaikin’ny fiangonana Fjkm Salema vaovao 67 Ha izy ary tokony ho nody avy hatrany, nefa tsy niditra ny trano mihitsy ny alatsinainy hariva. Tsy mbola taitra ny vadiny tamin’io fa nihevitra fa mety ho nanohy avy hatrany niasa tamin’ny alina izy », hoy ny fitantaran’ny rahavavin-drenin’ny maty, nijery ny razana teny amin’ny hopitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona, omaly.
Araka ny voalazan’ireo mpiasa sy mpitsabo eo anivon’ny hopitaly dia « mpitandro ny filaminana no nanatitra ity lehilahy ity tao amin’ny hopitaly ny talata vao maraim-be ».
Araka ny voalazan’ireo fianakaviany dia « irony mpitandro ny filaminana mandeha môtô irony no nisambotra azy teo amin’ny Varobe ny harivan’io alatsinainy io ». « Ireo olona amin’ny manodidina no nilaza taminay izany », hoy izy ireo nanizingizina.
Alahelo, ranomaso ary fahakiviana no hita taratra tamin’ireo fianakaviana teo am-pahitana an’I Bota. “Vonona ny hikaroka ny marina izahay na ho aiza na ho aiza. Olona tsotra tsy manana olana ary mamy hoditra na teo anivon’ny fiarahamonina na teo anivon’ny fiangonana, nefa novonoina fotsiny”, hoy ireo rahalahin’ny maty, omaly.
“Nitoraka tamin’ny flesy ny fiarakodia nitondra ny Filohan’ny Fahefana avon’ny tetezamita io lehilahy io ary nenjehin’ny polisy. Tamin’izy nandositra izay no nianjera sy nitrosona tamin’ny tany ka vaky ny lohany dia naterina tany amin’ny hopitaly”, hoy indray kosa ny fanazavana avy amin’ny fampitam-baovaon’ny mpitandro ny filaminana. Raha ny hitan’ireo nanatri-maso anefa dia nisy diana “menotte” tamin’ny tanan’ilay maty ary nisy mangana ihany koa teo amin’ny handriny.